Umsebenzi, Ukuphathwa Kwemisebenzi
Akekho kithi ofuna ukuqaphela ukuthi amakhono ochwepheshe atholakale ngaphambilini awasetshenziswanga umqashi ngokugcwele. Akekho kithi ofuna ukukhubeka endaweni futhi alahlekelwe amandla ethu. Noma kunjalo, le nkinga ivame kakhulu kwimibuthano yebhizinisi. Isibonelo, abaningi abaphothula iziqu zaseyunivesithi basitshela ukuthi umsebenzi wabo wokuqala awudingi imfundo ephakeme. Kunzima ukubekezelela umbono wokuthi ufundela ize iminyaka eminingi kangaka. Ngenhlanhla, iningi labantu abakulesi simo bathola amandla okuqhubekela phambili.
Le nkinga ayikhathaleli kuphela abafundi abafundele amanyuvesi. Noma yimuphi umuntu angaphumelela isikhundla sakhe ngezizathu ezihlukahlukene. Angase angafuni ukusebenza nge-qualification ephansi, aqonde ukuthi ukhethe umsebenzi ongafanelekile noma owile enhlanganweni engahambisani nezimiso zakhe. Ngaphambi kwakho, ezinye izibonakaliso ukuthi esikhathini esizayo esiseduze udinga ukukhushulwa. Futhi uma ungayitholi, kuzodingeka ufune omunye umsebenzi.
Uma uphazamisekile ngenxa yesithukuthezi - lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekile sokuthi usuqalile umsebenzi wakho. Uma ungeke ukwenze ngaphandle kokushukela ne-caffeine emsebenzini, khona-ke uhlakaniphile kakhulu. Kufana nokufana nokuya esikoleni futhi. Kodwa-ke, ngokusho kochwepheshe, umuzwa wokuzikhukhumeza awufani nokungahleleki. Ukuze ungalokothi ulahlekelwe amakhono akho ochwepheshe, uthola njalo emaphrojekthi wangaphandle futhi usize ozakwabo kakhulu.
Awusisebenzisi amandla amaningi
Imisebenzi eniyinikiwe ibonakala ibulula kakhulu. Noma kunjalo awukaze ufike ekhaya unomuzwa wokufezeka noma umuzwa wokuthi umsebenzi ususiwe wonke ama jus. Kubonakala sengathi awuchithi ingxenye yomzamo wakho. Yiqiniso, kuhle ukuba nedumela njengomuntu ohlakaniphile kunazo zonke ehhovisi, kodwa uma uphazamisa osebenza nabo njalo, lokhu kuyisimo esiyingozi. Awunawo omncintisana naye, akekho ozoyinselele futhi akekho ozofakazela ukuthi uyabaluleka. Lesi isibonakaliso sokuthi udinga ukukhushulwa. Uma kungenjalo, uzokwenza lo msebenzi kwabanye.
Osebenza nabo abahlali
Uma osebenza nabo behlelwe ngesikhashana lapho ukhuluma ngomqondo omusha noma uzama ukudlulisela umbono wabo kubo, bonke laba bantu abafuni noma abakwazi ukukunikeza inselelo engqondo. Ngisho noma banobungane futhi basebenza kanzima, akufanele uhlale phakathi kwabo.
Noma yimuphi indawo yokusebenzela kufanele inikezwe ngamathuba okukhula komsebenzi nokuqeqeshwa komsebenzi. Uma ungenayo ukufinyelela kwezifundo zokuqeqesha eziphambili, uma uqonda ukuthi akukho okunye okumele ufunde lapha, ngokushesha maduze lo msebenzi uzokutshela. Abasebenzi akufanele babe nokuntuleka kwengqondo.
Umphathi wakho akanalo umbono
Awukwazi ukuzidela ukuze usebenze ngokuphelele, lapho umphathi wakho engazi ukuthi kufanele alwele kuphi. Umphathi wakho kufanele abe yisibonelo kuwe, futhi uma engenayo uhlelo lokukhuthaza inkampani, ngeke akwazi ukukufundisa noma yini.
Uma uthatha phansi enkomfeni noma emhlanganweni ovamile, ozakwabo baqala ukukubuka ngokuthukuthela. Babona kuwe i-upstart, edingeka kakhulu. Bacabanga ukuthi uthanda ukugeza emanzini enkazimulo, kodwa empeleni uyaphoqeleka ukuba uhambe emqaleni wakho engoma yakho. Yingakho ukhetha ukuthula, ngoba awufuni ukuba yisitha seqembu lonke.
Bonke abantu benza amaphutha, kodwa uma uthola njalo amaphutha emsebenzini wabasebenzi bakho - lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekisayo sokuthi uhlakaniphile kakhulu emsebenzini wakho.
Sebenza isikhathi sesikhathi kanye nokubulawa kwayo ngokuhambisana nomthetho
Indlela ukubhaka esiphundu inyama multivarka?
Primer for eyelashes: i Uhlolojikelele, yokusetshenziswa, imibono kanye nokubuyekeza
Calorie tuna, ukunambitheka kwalo okuhle